Kim Jong Kook နဲ့ အီစီကလီဆက်လုပ်ရင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ Hong Ji Young
On March 21, 2018 March 21, 2018 By Naing Naing
‘Running Man’ ရဲ့ ‘2018 Global Project’ မှာ ပါဝင်အားဖြည့်တဲ့ Trot သီချင်းအဆိုတော် Hong Jin Young တစ်ယောက်ကတော့ Runner တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုနဲ့အတူ ခြိမ်းခြောက်မှုအချို့ကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူမဟာ Runner တွေရဲ့အချစ်တော်ကြီး Kim Jong Kook နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးပြနေလို့ပါတဲ့။
Hong Jin Young က သူမရဲ့ Instagram ကနေပြီး Kim Jong Kook နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ Video Clip လေးတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ် Running Man Program ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရာမှာလည်း သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက အရမ်းလိုက်ဖက်နေလေတော့ အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေက စနောက်ခဲ့ကြရာမှာ Hong Jin Young က “သူမပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Jong Kook Oppa နဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပြီးထဲက သူမကို Instagram ကနေပြီး ခြိမ်းခြောက်တဲ့ Message တွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက Kim Jong Kook Fan အချို့က Jong Kook Oppa ကိုဆက်ပြီးမြူဆွယ်နေမယ်ဆိုရင် သတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး သူမကို ခြိမ်းခြောက်လာခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို အဖွဲ့ဝင် Yang Se Chan က “Jong Kook Hyung နဲ့ Ji Hyo Noona တို့ကို Ship ကြတဲ့ Fan အရေအတွက်က အရမ်းကိုများပြီး Spartace Couple ကို အားပေးကြတဲ့ Community ကအရမ်းကြီးနေတာကြောင့်ပါ” ဆိုပြီး Hong Jin Young ကိုဖြေသိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
A post shared by hongjinyoung 홍진영 (@sambahong) on Jul 1, 2017 at 3:38am PDT
ဟိုတစ်လောက Kim Jong Kook နဲ့ Song Ji Hyo တို့နှစ်ဦးရဲ့ Dating Rumor ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Spartace ကို Ship ကြတဲ့ Fan တွေရဲ့အားပေးမှုက အရမ်းကိုဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသလိုပဲ Kim Jong Kook ရဲ့အမေက “Song Ji Hyo ကိုသူမအနေနဲ့ ချွေးမလေးတစ်ယောက်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်” ဆိုပြီး ‘My Ugly Duckling’ အစီစဉ်မှာ ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
ဟိုအရင်ထဲက ‘Monday Couple’ ရဲ့ Fan တွေနဲ့အပြိုင် ‘Spartace’ Fan တွေဟာ သူတို့ Idol တွေကို လုံးဝအထိမခံနိုင်စွာနဲ့ အားပေးထောက်ခံလာခဲ့ကြတာပါ။ ခုလို အခြေနေမျိုးမှာ Hong Jin Young ကလည်း ပါဝင်လာပြန်တော့ Fan တွေအရမ်းကိုစိုးရိမ်သွားပုံရပါတယ်။ Hong Jin Young ကတော့ “သူမက Running Man မှာ ခဏလေးလာပြီး သရုပ်ဆောင်တာပါ။ ပြီးရင် သူမ လေလိုပဲ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ” ဆိုပြီးတော့ ပြောလာခဲ့ရာ Running Man အဖွဲ့ဝင်အားလုံး တဝါးဝါးနဲ့ရယ်ပွဲကျခဲ့ပါတော့တယ်။
ကဲ.. ပရိသတ်ကြီးလည်း Running Man ရဲ့ ‘Global Project’ အစီစဉ်လေးကို အားပေးကြပါဦးနော်။ Runner တွေကတော့ မတိုက်တွန်းလည်း ‘Running Man’ ကို Right Time ကြည့့်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်။ ?
A post shared by hongjinyoung 홍진영 (@sambahong) on Feb 17, 2018 at 6:50pm PST
PREVIOUS POST Previous post: တစ်ကိုယ်စီ ရွက်လွှင့်ကြတော့မယ့် Fifth Harmony
NEXT POST Next post: အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး K-Pop Idol Girl Group များ!!